Inta badan waddooyinka Muqdisho oo saaka loo xiray banaan bax lagu taageerayo Madaxweynaha iyo Munaasibadii oo Bilaabatey..
Inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa saaka u xiran banaan bax lagu taageerayo boqolka maalmood ee Madaxweyne Farmaajo, iyadoo boqolaal ruux ay ku qul qulayaan Garoonka ciyaaraha ee Banaadir Stadium.
Ciidamada ammaanka ayaa waddooyinka ku sugan, kuwaasoo meelaha qaar isticmaalka dadka iyo gaadiidka ka xadiday, waxaana si aad ah loo adkeeyay ammaanka Garoonka Banaadir Stadium oo xalay ciidamo la geeyay.
Diyaar garowga iyo abaabulka Banaan baxan ayaa maalmihii la soo dhaafay laga dareemayay magaalada Muqdisho, kaasoo uu waday Maamulka Gobolka Banaadir.
Dadweyne fara badan oo ay ku jiraan haween ayaa saaka basas looga soo qaadayaa xarumaha degmooyinka, iyadoo banaan baxa lagu wado in la soo gaba gabeeyo gelinka hore, maadaama ay xilli Ramadaan tahay.
Inta badna Warbaahinta ayaa la sheegay in laga xadiday ka qeyb galka banaan baxan, iyadoo loo ogolaaday warbaahin kooban ah, oo goobo cayiman laga soo qaadi doono, socodka lugta ee garoonka Banaadir Stadium ayaa la diiday, waxaa dadweynaha ka qeyb galaya banaan baxa degmooyinka looga soo qaadayaa gaadiid.
Madaxweyne Farmaajo iyo mas’uuliyiinta kale ee dowladda ayaa ka qeyb galaya banaan baxa, iyadoo Madaxweyne Farmaajo uu khudbadiisa u horeeyay oo fagaare shacabka ugu jeedin doono, taasoo dad badan ay u dhega taagayaan.
Munaasibada oo ah mid bilaabatey si toos ahna uga socoto Telefishinada soomaalida waxaana goob joog ka ah Qodbooyina ka jeedinaya dhamaan madaxda dalka iiyadoo amaankana si weyn loo adkeeyey taasoo ay sugayaan ciidamada Soomaaaliyeed oo gacan ka helaya kuwa Amisom.
Si kastaba ha ahaatee banaan baxan maanta oo Axad ka dhacaya Muqdisho ayaa noqonaya kii u horeeyay ee ugu ballaarnaa ee ka dhaca Muqdisho, tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii Madaxweyne Farmaajo oo dadweyne fara badan ay ka dhigeen Muqdisho iyo gobolada kale isu soo bax soo dhoweyn ah.